5 arimood oo aad maalin kasta ku xoojin karto jacaylka kaala dhexeeya gacalisadaada | Raganimo University
5 arimood oo aad maalin kasta ku xoojin karto jacaylka kaala dhexeeya gacalisadaada
February 24, 20193 minutes
Jaceyl kasta waxa uu ku bilowdaa si xoogan oo xiiso badan balse dib ayuu laciif ka noqdaa. Marka ay lamaanahu isla qabsadaan oo caadi isku noqdaan waxaa meesha ka baxa xiisihii iyo dareenkii cuslaa. Tani waa caadi balse mararka qaar waxaa dhici karta in lamaanuhu ay kala fogaadaan oo ugu dambeyntii uu aad u laciifo jaceylkooda. Hadaba sidee maalin kasta u xoogan kartaa jaceylkiina?
La imoow hal-abuur cusub oo aad ku muujiso jaceylkaaga
"Waa ku jeclayahay iyo anaa kaa daran" waxay xiiso leedahay bilowga hore balse markii lamaanuhu mudo wada socdaan waxaa loo baahanyahay in aad la timaado erayo cusub iyo waxyaabaha cusub oo aad ku muujin karto jaceylkaaga. Waxaa muhiim ah in aad barato luuqada jaceylka ee ay ka hesho gacalisaada iyo waxyaabaha kale sida hadiyadaha, iwm ee kor u qaadi kara jaceylka ay kuu qabto. Waxaa lagaa doonayaa in aad si joogto ah uga fikirto hal abuur cusub oo aad jaceylkiina kor ugu qaadi karto.
Amaanta u badi
Horay ayaan mowduuc ugu qornay muhiimada ay leedahay in aad erayo macaan ku dhahdo gacalisaada, haddii ay tahay mid aad hada wada bilowdeen xiriirka ama mid aad sanado wada socoteen. Dumarku waa jecelyihiin erayada macaan. Qaasatan marka aad dooneyso in aad ku dhaliso dareen kacsi galmada ka hor ayay muhiim tahay in aad ugu qubeyso erayo macaan iyo amaan. Balse waxaa muhiim ah in amaanta iyo eryada macaan ay niyada kaa jiraan oo aadan iska dhahayn oo keliya.
U muuji in ay aktaada qiimo ka leedahay
Waxaa aad muhiim u ah in aad naftaada xasuusiso oo aadan hilmaamin qiimaha ay gacalisaada ka joogto agtaada, oo aadan i siisinin jaceylkeeda iyo taageeradeeda. Waxaa muhiim ah in aad muujiso oo aad u sheegto gacalisaada in aad ku faraxsantahay xiriirkiina. Is waydii naftaada sida aad gacalisaada ugu muujin karto in aad ku qanacsantahay jaceylkiina? Iyo qaasatan waxyaabaha ay kuu qabato, sida shaqada guriga, daryeelka caruurta iwm.
Dad badan qaasatan ragga ayaa hilmaama hawsha adag ee ay xaasaskooda ka hayaan guriga iyo guud ahaan mida ay u hayaan xiriirkooda. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa in aad ka caawiso hawsha guriga. Wax kasta oo aad ku muujin karta in ay qiimo weyn aktaada ka leedahay waa in aad samaysaa.
Kaftanka iyo qosolka u badi
Qosolku waa daawo oo farxada ayuu kordhiyaa. In aad xaaskaaga la sheekaysato oo aad la kaftanto isla markaana aad wada qososhaan waxaa hubaal ah in ay kor u qaadi doonto xiriirkiina. Lamaanaha wada ciyaara oo waqti wada qaata way ka farxad badanyihiin kuwa kale.
Ku amaan dadka kale hortooda
In aad gacalisadaada ku amaanto dadka kale hortooda qaasatan qoyska iyo asxaabta iyada oo kula joogta waxay kordhinaysaa kalsoonida ay kugu qabto. Waxayna xasuusinaysaa in aad jeceshahay. Dadka oo dhan waa jecelyihiin in la amaano waliba dadka kale hortooda lagu amaano. Adiga laftaadana waxaad muujinaysaa dareenka aad u qabto gacalisadaada oo ay marqaati ka yihiin dad kale.
Galmada raaxada leh u badi
In aad dareensiiso gacalisaada in aad jeceshahay in aad galmada la samayso waa qeyb weyn oo ka mid ah waxyaabaha aad ku xoojin karto xiriirkiina. Marka lamaanuhu ay galmada samaynayaan ma jidho mar ay isaga dhowyihiin xaga jirka iyo xaga niyada. Marka in aad gacalisaada la samayso galmo raaxo leh oo jaceyl ku dhisan oo joogto ah waxaa hubaal ah in ay sii xoojinayso xiriirkiina.